दिल्लीले मुम्बईसँग हार्नुको चार कारण | Hamro Khelkud
दिल्लीले मुम्बईसँग हार्नुको चार कारण
एजेन्सी – दिल्ली क्यापिटल्स इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को पहिलो क्वालिफायरमा बिहिबार राती मुम्बई इन्डियन्ससँग ५७ रनले पराजित हुन पुग्यो ।
मुम्बई दिल्ली हराउँदै आइपिएलमा छैटौं पटक फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भयो । जितको लागि २ सय १ रनको विशाल विजयी लक्ष्य पछ्याएको दिल्ली २० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा १ सय ४३ रनमा समेटियो । दिल्लीका मार्कस स्टोइनिस ६५ रन र अक्षर पटेलले ४२ रन बनाउन बाहेक अन्यले सम्झन योग्य प्रर्दशन गर्न सकेनन् । शीर्षक्रमका तीन ब्याट्सम्यान शिखर धवन, पृथ्वी शा र अजिंक्या रहाणे शून्यमा आउट भएका थिए ।
दिल्लीले फाइनल प्रवेशका लागि थप एक मौका पाउने छ । शुक्रबार एलिमिनेटरमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र सनराइजर्स हैदराबादबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसको विजेताले आइतबार फाइनल प्रवेशका लागि दिल्लीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दिल्लीको हारमा मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल र स्पिनर रविचन्द्रन आश्विनको प्रर्दशन एक सकारात्मक पक्ष रह्यो । तर दिल्लीले फाइनलमा स्थान बनाउन आगमी खेलमा उत्कृष्ट पूनरागमन गर्न आवश्यक देखिन्छ । जसको लागि टोलीको प्लेइङ –११ मा फेरबदल जरुरि छ ।
बिहिबार प्रायः सबै समय मुम्बई खेलमा हाबी बन्यो । एक समय सूर्यकुमार यादव र काइरन पोलार्ड आउट हुँदा १२.२ ओभरमा १०१–४ को अवस्थामा रहँदा दिल्ली खेलमा फर्किने संकेत देखाएको थियो । तर हार्दिक पान्ड्या र ईशान किशनले उत्कृष्ट अन्त्य गर्दै विशाल योगफलमा पुर्याए । दिल्लीले मुम्बईसँग हार्नुका प्रमुख चार कारण यस प्रकार छन् ।
४. बुमराहको घातक बलिङ
मुम्बईलाई सानदार जित दिलाउन तीव्र गतिका बलर जस्प्रित बुमराहले आफ्नो टि२० करियरकै उत्कृष्ट प्रर्दशन गरे । उनले ४ ओभरमा १ मेडन सहित १४ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । पहिलो ओभरमै दुई ब्याट्सम्यान गुमाएको दिल्लीलाई उक्त लक्ष्य पूरा गर्न त्यसपछिका ब्याट्सम्यानलाई उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
बुमराहले दोस्रो ओभरको दोस्रो बलमा योर्करमा शिखर धवनलाई पनि शून्यमै आउट गरेपछि दिल्लीको जित कठिन बनेको थियो । कप्तान श्रेयस ऐरमाथि केहि आशा गरिएको थियो । ऐरलाई पनि चौथो ओभरको पाँचौ बलमा १२ रनमा क्याच आउट गराएपछि दिल्ली २०–४ को अवस्थामा पुगेको थियो । दिल्लीलाई झिनो आशा मार्कस स्टोइनिसले देखाएका थिए ।
बुमराहले १६ औं ओभरको पहिलो बलमा बोल्ड आउट गर्दै मुम्बईको जित सहज बनाएका थिए । बुमराहले कुनैपनि समय दिल्लीका ब्याट्सम्यानलाई आफ्नो बलमा खुलेर खेल्न दिएनन् । बुमराहनै मुम्बईको जितमा प्लेयर अफ द म्याच चुनिए ।
३. दिल्लीका तीव्र गतिका बलरको कमजोर प्रर्दशन
दिल्ली तीन तीव्र गतिका बलरका साथ मैदान प्रवेश गरेको थियो । तर दिल्लीका तीव्र गतिका बलरको प्रर्दशन सम्झन लायक रहेन । स्पिनर रविचन्द्रन आश्विनले ४ ओभरमा २९ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । अक्षर पटेलले ३ ओभरमा २७ रन खर्चेका थिए । समग्रमा यी दुई स्पिनरले ७ ओभरमा ५६ रन खर्चे । तर दिल्लीका अन्य तीन तीव्र गतिका बलरले १४ ओभरमा १ सय ३६ रन खर्चिदा एक विकेट मात्रै लिन सके ।
अलराउन्डर मार्कस स्टोइनिसले १ ओभरमा ५ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए । प्रमुख तीन तीव्र गतिका बलरलेनै खराब प्रर्दशन गरेपछि कुनैपनि टोलीको जित कठिन बन्न पुग्छ । यी तीन तीव्र गतिका बलर एकले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्थे भने मुम्बईले उक्त विशाल लक्ष्य बनाउन सक्ने थिएन ।
रबाडाले ४२ रन खर्चिदा विकेट लिन सकेनन् । एनरिच नोर्कियाले एक विकेट लिदा ५० रन खर्चे । ड्यानियल साम्सले ४४ रन खर्चिदा विकेट लिन सकेनन् । दिल्लीले हार्नुको एक कारण यी तीन तीव्र गतिका बलरको खराब प्रर्दशन हो ।
२. किशन र पान्ड्याको उत्कृष्ट अन्त्य
एक समय मुम्बई १२.२ ओभरमा १०१ –४ को अवस्थामा थियो । जुन अवस्थामा दिल्लीले थप दुई विकेट चाडैंनै लिन सकेको भए मुम्बई थप दबाबमा पर्ने थियो । दबाबमा ठूलो सट खेल्दा अन्य विकेट आउने सम्भावना हुन्थो । तर कु्रनाल पान्ड्या र किशनले १६.१ ओभरमा १४०–५ को अवस्थामा पुर्याए । जुन अवस्थामा हार्दिक पान्ड्यान र ईशान किशन ब्याटिङमा थिए ।
यी दुईनै मुम्बईका अन्तिम ब्याट्सम्यान थिए । तर छैटौं विकेटका लागि हार्दिक र इशानले २३ बलमा ६० रन जोड्दै विशाल योगफलमा पुर्याएका थिए । यी दुबै ब्याट्सम्यान त्यस समयमा आउट भएको भए मुम्बई १ सय ७० को आसपासमा रोकिने अनुमान गरिएको थियो । जुन लक्ष्य पछ्याउँदा दिल्लीका ब्याट्सम्यानलाई मानसिक रुपमा दबाब पनि रहने थिए ।
पान्ड्या १४ बलमा ५ छक्का सहित ३७ र किशन ३० बलमा ४ चौका र ३ छक्का सहित ५५ रनमा अविजित रहे । यी ब्याट्सम्यानको उत्कृष्ट साझेदारी दिल्लीको हारको एक कारण बन्यो ।
१. ब्याट्सम्यानको खराब प्रर्दशन
दिल्लीको हारको प्रमुख कारण भनेको शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यानको खराब प्रर्दशन हो । उक्त विशाल लक्ष्य सफलता पूर्वक पछ्याउन पहिलो पावर प्लेमा कुनै विकेट नगुमाई उत्कृष्ट सुरुवातको आवश्यक दिल्लीलाई पर्दथियो । तर ट्रेन्ट बोल्टले पहिलो ओभरमै पृथ्वी शा र अजिंक्या रहाणेलाई शून्यमा आउट गरे ।
लगत्तै दोस्रो ओभरको दोस्रो बलमा बुमराहले धवनलाई शून्यमा बोल्ड आउट गरे । जुन आइपिएल इतिहासमा पहिलो पटक शीर्षक्रममा तीन ब्याट्सम्यानले खाता खोल्न नसकेका हुन् । शीर्षक्रमका तीन ब्याट्सम्यान सुरुवाती आठ बलमा कुनै रन नजोडी आउट हुँदानै दिल्लीको जित टाढि सकेको थियो । शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यान सस्तैमा आउट हुँदा त्यसको दबाब मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानमा पर्ने गर्दछ । उक्त दबाब कम गर्न सट खेल्ने क्रममा कप्तान ऐर क्याच आउट हुन पुगे ।
स्टोइनिसले दबाबमा उच्च प्रर्दशन गरेपनि अन्य प्रमुख ब्याट्सम्यान मुम्बई सामु निरिह बने । स्टोइनिस र अक्षर दुबै अलराउन्डरको रुपमा खेलेका थिए । प्रमुख ब्याट्सम्यानका रुपमा खेलेका कुनै पनि ब्याट्सम्यान चल्न सकेनन् । जुन दिल्लीको हारको प्रमुख कारण बन्यो । शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यानले राम्रो सुरुवात दिन सकेको भए दिल्ली पहिलो पटक फाइनलमा पुग्न सक्थ्यो ।